Bit By Bit - Ubunzima intsebenziswano - imisebenzi
isidanga wobunzima: ulula , eliphakathi , nzima , kakhulu kakhulu
kufuna zezibalo ( )
kufuna nokhowudo ( )
nokuqokelelwa kwedatha ( )
[ , , ] Omnye amabango imincili ukusuka Benoit et al. (2015) xa isihlwele-ngokweekhowudi nkqubo kwezopolitiko kukuba iziphumo reproducible. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) olunika unikezelo kwi Manifesto Corpus. Zama lokuyivelisa Isazobe 2 Benoit et al. (2015) usebenzisa abasebenzi abasuka Amazon Mechanical Bonk. Hayi efana iziphumo zakho?
[ ] Kwi projekthi InfluenzaNet iphaneli ntliziyo zabantu ingxelo izehlo, ukuxhaphaka, nokuziphatha yezempilo efuna enxulumene influenza-ezifana-ukugula (ili) (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Bathelekise uyilo, iindleko, yaye kusenokwenzeka ukuba iimpazamo InfluenzaNet, Google Flu Umzila, kunye neenkqubo tracking umkhuhlane zemveli.
Cinga ngexesha ukutshabalala, ezifana ukuqhambuka umkhuhlane iihagu. Chaza iimpazamo kwinkqubo nganye.
[ , , ] The Economist yi imagazini iindaba ngeveki. Yenza iprojekthi intelekelelo ngabantu ukubona ukuba Umlinganiselo kwabasetyhini namadoda kwiqweqwe liye landa kwexesha.
Eli phephancwadi unokuba igquma ezahlukeneyo iingingqi ezisibhozo ezahlukeneyo (Afrika, Asia Pacific, eYurophu, iManyano yaseYurophu, Latin America, kuMbindi Mpuma, North America, United Kingdom) kunye nabo bonke ngekhompyutha kweli ziko lewebhu The Economist . Thatha enye kule mimandla kwaye lenze uhlalutyo. Qiniseka ukuchaza iinkqubo zakho ngenkcukacha ezaneleyo ukuba elinokulinganiswa ngomnye umntu.
Lo mbuzo waphefumlelwa iprojekthi efanayo Justin Tenuto, inzululwazi data kwinkampani crowdsourcing le CrowdFlower , funda "Ngokwenene Time Magazine uthanda Dudes" .
[ , , ] Ukwakha phezu mbuzo ungentla, ngoku lenze uhlalutyo zonke iingingqi ezisibhozo.
Yintoni umahluko ngaba liphela kwimimandla?
Yimalini kwexesha elongezelelweyo kunye nemali njani ukuze ukonyusa-up uhlalutyo zakho zonke ezisibhozo imimandla?
Khawucinge ukuba Economist unalo ligubungela 100 ezahlukileyo kwiveki nganye. Qikelela ukuba ixesha elongeziweyo nemali bekuya ukuze ukonyusa-up uhlalutyo yakho ligubungela-100 ngeveki.
[ , ] [Kaggle] (https://www.kaggle.com/) na iwebhusayithi nginginya iiprojekthi umnxeba evulekileyo. Inxaxheba kwenye ezo projekthi.
[ ] Khangela ngokusebenzisa umba yakutshanje zikalindixesha entsimini yakho. Ingaba kukho nawaphi na amaphepha eyayiza kwenziwa reformulated njengeeprojekthi umnxeba evulekileyo? Ngoba kutheni?
[ ] Purdam (2014) uchaza ingqokelela data zabèka kungqiba eLondon. Shwankathela amandla kunye nobuthathaka kule kuyilo phando.
[ ] Angafuneki nganto yindlela ebalulekileyo ukuhlola umgangatho yokuqokelelwa kwedatha isasazwe. Windt and Humphreys (2016) ukuphuhlisa ukuvavanya inkqubo ukuqokelela iingxelo zeziganeko ungquzulwano zabantu eMpuma Congo. Funda iphepha.
ntoni uyilo lwabo ukuqinisekisa njani angafuneki nganto?
Abasifundisa iindlela ezininzi ukugunyazisa idata eqokelelwe yeprojekthi yabo. Shwankathela kubo. Leyo obona kuwe?
Sicebisa indlela entsha ukuba idatha i no angqinisiswe. Iingcebiso kufuneka bazame kwandisa ukuzithemba ukuba nibe kwi data ngendlela na iindleko-olusebenzayo nentsulungeko.
[ ] Karim nguLakhani noogxa (2013) kudale umnxeba evulekileyo ukufumana algorithms ezintsha ukusombulula ingxaki zebhayoloji bezibalo. Babefumana ngaphezulu kwama-600 amangeniso equlethe 89 iindlela bezibalo inoveli. Zezingeniso, bamkela 30 elingaphezulu ukusebenza US National namaZiko MegaBLAST lezeMpilo, kunye nokungeniswa ngeyona zombini nokuchaneka mkhulu nesantya (phindaphinda1,000 ngokukhawuleza).
Funda iphepha zabo, baze emva koko acebise ingxaki uphando lwentlalo ukuba bangasebenzisa uhlobo olufanayo lokhuphiswano evulekileyo. Ngokukodwa, olu hlobo lokhuphiswano evulekileyo yejoliswe ukukhawulezisa nokuphucula ukusebenza ngendlela algorithm ezikhoyo. Ukuba akukwazi ukucinga yengxaki enjengale entsimini yakho, zama ukucacisa ukuba kutheni na.
[ ] Iiprojekthi ezininzi intelekelelo babantu sithembele nxaxheba abasuka Amazon Mechanical Bonk. Sign-ukuba abe ngumsebenzi kwi Amazon Mechanical Bonk. Chitha ngeyure enye ukusebenza apho. Ingaba oku kuyichaphazela iingcinga zakho malunga uyilo, umgangatho, kunye zokuziphatha lweeprojekthi compuation kwabantu njani?